ဆန်ချို က ရက်ဖို့ဒ် နေရာဝင်ကစားပြီး ခြေစွမ်းပြနိုင်မှာလား ? – Sport Gaber
ဆန်ချို က ရက်ဖို့ဒ် နေရာဝင်ကစားပြီး ခြေစွမ်းပြနိုင်မှာလား ?
ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီသစ် စတင်ဖို့ ဆယ်ရက်တောင် မလိုတော့ပါဘူး ။ အသင်းတိုင်းဟာ နွေရာသီမှာ အင်အား ဖြည့်တင်းမှု ကိုယ်စီနဲ့ ရာသီသစ်မှာ အစွမ်းကုန် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြမှာပါ ။ အဲ့ဒိအထဲက တစ်သင်း ကတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပါပဲ ။ အိုလေ ဂန်နာ ဆိုးရှား ရဲ့ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန်းက ချန်ပီယံ မန်စီးတီး ရဲ့ အောက် ဒုတိယ နေရာနဲ့ ရာသီပိတ်သိမ်း နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဒီနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ဟာ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ ပြည့်နှက် ခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ ။ ကာလရှည် ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ ဆန်ချို ကို ခေါ်နိုင်ခဲ့သလို ခံစစ် အတွက်လည်း ရီးရဲ မက်ဒရစ် ရဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် ပြင်သစ် ခံစစ်မှူး ရာဖေး ဗာရန်း ကို ခေါ်ယူ အားဖြည့် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဆန်ချို ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းမှာ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အားနည်း နေတဲ့ ညာတောင်ပံ ပြဿနာကို အဖြေရှာဖို့ အတွက် ခေါ်ယူခဲ့တာပါ ။ ဒေါ့မွန် နဲ့ အင်္ဂလန် အသင်းတွေမှာလည်း ဆန်ချို က ညာတောင်ပံ ကစားသမား အဖြစ်နဲ့သာ အများဆုံး ကစားခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် လတ်တလော မှာတော့ အခက်အခဲ အချို့ ရှိလာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဘယ်တောင်ပံ မှာ အဓိက ကစားနေတဲ့ အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှူးလေး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ သူ့ရဲ့ ကာလရှည် ခံစား နေရတဲ့ ပုခုံး ဒဏ်ရာကို ခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူလိုက်ပါပြီ ။ ဒါကြောင့် ရက်ဖိုဒ့် ဟာ အောက်တိုဘာ လောက်မှသာ ပြန်ကစားပေးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အချိန် မတိုင်ခင် အထိ ဘယ်တောင်ပံကို အခြား တစ်ယောက်နဲ့ ဆိုးရှား အစားထိုးရမှာပါ ။
အရင်တုန်းက အသင်းမှာ ရက်ဖိုဒ့် နဲ့ မာရှယ် တို့က ဘယ်တောင်ပံ မှာ အလှည့်ကျပုံစံ နဲ့ ကစားခဲ့ကြပါတယ် ။ လူကာကူ ကို ရောင်းထုတ် အပြီးမှာတော့ ဆိုးရှား ဟာ အန်တိုနီ မာရှယ် ကို အထောင် တိုက်စစ်မှူး အဖြစ် ကစားဖို့ သတ်မှတ် ခဲ့တာကြောင့် ရက်ဖိုဒ့် တစ်ဦးသာ ဘယ်တောင်ပံ ကစားသမား အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အချို့ ပွဲတွေမှာတော့ ပေါ့ဘာ ဟာ ၄-၄-၂ ကစားကွက်မှာ ပေါ့ဘာ က ဘယ်ခြမ်းကို ထွက်ပြီး ကစားတာကို တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး ဘယ်တောင်ပံ နေရာကို အပိုင်စားထားတဲ့ ရက်ဖိုဒ့် ကို ၂ လ ခန့် ဆုံးရှုံးရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဆန်ချို ဟာ သူအားသန်တဲ့ ညာတောင်ပံ အစား ဘယ်တောင်ပံကို ပြောင်းလဲ ကစားပေးရဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။ မနှစ်က အသင်းအတွက် ဂိုးတွေသွင်းပြီး အားကိုး ခဲ့ရတဲ့ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီ ဟာ အခုချိန်အထိ အသင်းနဲ့ လာရောက် မပူးပေါင်းသေးတာကြောင့် ရာသီ အစ ပွဲတွေမှာ မာရှယ် ကိုသာ တိုက်စစ်မှူး အဖြစ် ဆိုးရှား သုံးသွားရနိုင်ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဆန်ချို ဟာ ဘယ်တောင်ပံ ကို ခေတ္တ ပြောင်း ကစားပေးရနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ ညာခြမ်း ကိုတော့ မနှစ် ကတည်းက ကစားနေတဲ့ လူငယ် တိုက်စစ်သမားလေး မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် က ဆက်လက် ကစားသွားရဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဆိုးရှား ဘယ်လို နည်းဗျူဟာတွေ ထုတ်သုံးမလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ ။
ပွဲစဉ် အနေအထားအရတော့ ယူနိုက်တက် တို့ ရာသီအဖွင့် မှာ အသင်းကြီးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင် ရဖို့ မရှိပါဘူး ။ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့ မှာ လိဒ်ယူနိုက်တက် ကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံပြီး ရာသီသစ် ကို ဖွင့်လှစ် ရမှာပါ ။ အဲ့ဒိ နောက်မှာတော့ ဆောက်သမ်တန် ၊ ဝုဗ် ၊ နယူးကာဆယ် ၊ ဝက်စ်ဟမ်း တို့နဲ့ ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင် ရမှာ ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ အကုန်အထိ ပွဲမကြပ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ကို အကောင်းဆုံး စာမေးပွဲ စစ်မယ့် ကာလ ကတော့ အောက်တိုဘာ ဖြစ်ပြီး အဲဗာတန် ၊ လက်စတာ ၊ လီဗာပူး ၊ စပါး တို့ နဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်သလို ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်တွေလည်း ရောက်ရှိ လာပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ပွဲဆက် ၊ ပွဲကြပ်တွေကို ဆက်တိုက် ယှဉ်ပြိုင် ကစားရတော့မှာပါ ။
ဒါကြောင့် ဒီပွဲကြပ်တွေ မတိုင်ခင်မှာ ရာသီအဖွင့် ပွဲတွေကနေ အမှတ်များများ ရယူထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘောလုံးရာသီဟာ မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်လာ နိုင်မယ့် အလားအလာကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အားသန်တဲ့ နေရာမှာ မကစားရမယ့် ဆန်ချို ၊ အထောင် တိုက်စစ်မှူး စစ်စစ် လို့ မခံစားမိသေးတဲ့ မာရှယ် ၊ ထိပ်တန်း အဆင့်ကို မရောက်သေးတဲ့ ဂရင်းဝုဒ် တို့ ရဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ် ဟာ ဒီလို ရာသီအစ ပွဲမကြပ်မှုကို အားသာချက် အဖြစ် ရယူနိုင်မလား ဆိုတာကတော့ . . . . .
အာတီတာ တစ်ယောက် အာဆင်နယ် နည်းပြရာထူးကနေ ဘယ်အချိန်မှာ ထုတ်ပယ် ခံရနိုင်သလဲ ဆိုတာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ ဝီလ်ရှား
မန်ယူအသင်းရဲ့ အမှိုက်တစ်စဟာ အင်တာမီလန်မှာ ရွှေဖြစ်ခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီးမှာ ပိုမိုတောက်ပမှာဖြစ်လို့ မန်ယူအသင်းကို သတိထားဖို့ တိုက်တွန်းသွားတဲ့…